उपचारका लागि अशक्त बिरामीले १२ ठाउँमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता | Nepal Ghatana
उपचारका लागि अशक्त बिरामीले १२ ठाउँमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता
प्रकाशित : १९ चैत्र २०७७, बिहीबार २१:२०
भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको भीडले झनै अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।
अस्पतालमा टिकटबाट सुरु हुने लाइन औषधि लिएर घर फर्कने बेलासम्म झण्डै १२ ठाउँमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय कमजोर बिरामीहरु लाइन बस्दा बस्दै भूइँमा नै ढल्न सक्ने अवस्था आएको बिरामीहरुले बताएका छन् । अस्पतालमा देखिएको भीडले अर्काेतिर कोरोनाको जोखिम पनि झनै बढ्दै गएको छ ।
भरतपुरको ज्योतिनगरबाट उपचारको लागि आएकी ७० वर्षीय रमादेवी सापकोटा आज बिहान ७ बजेदेखि लाइनमा बसेकी थिइन् । टिकट लिँदा लाइनमा बसेकी उनी, टोकन लिन लाइनमा बसिन्, टोकन लिएपछि डाक्टरलाई देखाउन लाइनमा बसिन्, डाक्टरलाई देखाएपछि फेरि रगत जचाँउन प्रयोगशाला शुल्क बुझाउन लाइनमा बसिन् । प्रयोगशालाको परीक्षणको लागि रसिद ल्याएकी उनले रगत र पिसाब राख्ने भाँडोको लागि लाइनमा बसिन् । उनको रगत झिकेर प्रयोगशालाबाट बाहिर निस्कँदा दिनको झण्डै दुई बजेको थियो । प्रयोगशालाको पछाडि ढोकाबाट निस्कँदै गरेकी उनले भनिन्, ‘ लाइन बस्दा बस्दै हैरान भए अहिले त रिँगटा लागे जस्तो भयो । बिहानदेखि केही खाएको छैन ।’ उनले नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा दुःख दिएर निजी अस्पतालमा जान बाध्य पारिएको गुनासो गरिन् । रगत परीक्षणमा दिए पनि उनको रिपोर्ट आउँन आइतबारसम्म कुर्नु पर्छ । फेरि उनले डाक्टरलाई रिपोर्ट देखाउँन त्यसैगरी लाइनको निरन्तरता दिनुपर्छ । बिमा, कुपन, प्रयोगशाला कतै पनि वृद्ध नागरिकहरुलाई लाइन बस्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । अस्पतालमा लाइन बस्दा नत पर्याप्त कुर्ची छन् नत वृद्धवृद्धालाई विशेष प्रथमिकता छन् । उल्टै कोरोनाको जोखिममा रहेका वृद्धवृद्धा ठेलमेल गर्दै उपचारको लागि अस्पताल पुग्दा रमादेवी जस्तै धेरै वृद्धवृद्धा झनै कोरोना संक्रमणको जोखिममा पुगेका छन् ।
अस्पतालका पूर्वअध्यक्ष प्रदेश सांसद विजय सुवेदीले अस्पताल प्रशासनले जनशक्तिलाई सही ढंगबाट परिचालन गर्न नसकेर यस्तो समस्या आएको नारायणी अनलाइनलाई बताए । उनले भने, ‘एक ठाउँमा इन्ट्री भएपछि पटक पटक लाइन बस्नुपर्ने काम निकै खेदजनक छ । पूर्वाधार निर्माण र जनशक्तिलाई सही ढंगबाट परिचालन नगरेसम्म यो समस्या हल हुने सम्भावना छैन ।’ उनले अस्पतालमा नियुक्त हुने मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टलाई पूरा समय काम गर्न नदिने प्रवृत्तिले पनि अस्पताल प्रशासन कमजोर बनेको बताए ।
भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. बासुदेव पाण्डेले आफू आएको भर्खर एक महिना भएकोले यसबारेमा अध्ययनमा नै रहेको बताए । उनले भने, ‘ अस्पतालको समस्याबारे सबै सरोकारवालाहरु राखेर कार्यशाला सञ्चालन गरिसकेको छु । अस्पतालको समस्याको पहिचान गर्दै समाधानको उपायहरु पत्ता लगाउन अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार हुँदै छ ।’ उनले यति धेरै बिरामी आउने अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गर्न सके केही सहज हुने बताए । उनले भने, ‘ राजनीतिको कारणले पनि अस्पतालमा समस्या आएको छ । पुराना र अनुभवी डाक्टरहरु अस्पतालमा नभेटिने समस्याहरु पनि छन् ।’
त्यसैगरी भरतपुर अस्पतालका प्रवक्ता डा युवानिधी बसौलाले अस्पताल भद्रगोल बन्दै गएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘बिरामीको भीडले डाक्टरहरु नै कार्यकक्षमा पुग्न नसक्ने अवस्था छ । सामाजिक दूरीको कुरा त लगभग असम्भव नै छ । अस्पतालमा कोरोनाको जोखिम झनै बढ्दै गएको छ ।’ उनले पटक पटक मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट बदलिँदै जाने प्रवृत्तिले पनि व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताए । उनले अनलाइनमा सबै सिस्टमलाई सञ्चालन गर्न सके बिरामीहरु १२ ठाउँमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता कम हुने विचार राखे । अस्पतालमा यस्तो समस्या देखिएको बर्षाे भए पनि समस्याको समाधान निस्कन नसक्नु विडम्वना भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
भरतपुर अस्पतालमा दुई सङ्क्रमितको मृत्यु
भरतपुर अस्पतालमा भदौ यता तीन मेसु परिवर्तन, अस्पतालको काम प्रभावित
ठाकुर पक्षमा लाग्ने सांसदको पद संकटमा, बचाउने विकल्प के छन् ? राष्ट्रिय
अभिनेता बिराज भट्ट दुर्घटनामा परे मनोरन्जन
जारी निषेधाज्ञा कैलालीमा साउन २१ गतेसम्म लम्बियो, सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रोक प्रदेश
धम्काउने मेरो शैली होइन, ‘म भक्तपुरको असल संस्कारयुक्त परिवारमा हुर्केको मान्छे हुँ राष्ट्रिय